トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Hlola ijubane esikhundleni Xintai of pachinko wamakhaza
Kwasukasukela e sasemakhazeni pachinko kufana umcimbi omkhulu Ekhuluma esikhundleni Xintai, kwaba okwakwenziwa ngejubane of mayelana kanye eyodwa noma izinyanga ezimbalwa ngenyanga. Okwamanje akukho ushintsho izenzakalo ezibalulekile ukuze udonse amakhasimende, kodwa njalo uye abe njalo ngokwanele ngeke kuqhathaniswe. Kukhona omunye iziqondiso ezimpondweni wawuthabatha, kodwa ijubane ukwenza esikhundleni Xintai, izimo indawo futhi kwamakhasimende base, kuzohluka yizimo ibhizinisi of pachinko. Ekhuluma ngesikhathi izimo indawo
, e wamakhaza pachinko e wamakhaza pachinko futhi phambi esiteshini endaweni yedolobha, Xintai esikhundleni iye yenziwa njalo ngesonto. Isizathu salokhu wukuthi, endaweni yedolobha kanye phambi esiteshini, uke wazibuza ukuthi umncintiswano ethambekele pachinko eshintsha tibheke isibe ngamandla. Xintai, ke kuye kwaba yinto eyivela kubaluleke kakhulu ukuze ukuheha amakhasimende.
ezingomakhelwane pachinko emakhazeni, uma ukwethulwa onobuhle ezithandwayo eziningi ezinkulu, siyoba yini isimo ongenakugwenywa ukuwa ukuthi okuningi egijima. Ukuze avimbele ukuba isimo, uyaphi ukuba kuqhathaniswa ngokwethula okulingana nombolo ukuze isibalo ukwethulwa nezitolo omakhelwane safike ulwazi kusukela abakhiqizi. Ngo wamakhaza pachinko yedolobha, amaqhinga anjalo aye eyenziwa njalo ngesonto, mina ijubane esikhundleni Xintai is isibe ezingasho Ukuze ngokushesha.
Nokho, umshini pachinko kuyoba amakhulu ezinkulungwane yen elilodwa ngayinye. Ukuze ushintshashintsha le Xintai, ke nezindleko ezinkulu kuthatha. Ngokushesha Uma kwethulwa amayunithi 10, liyoba iyunithi izigidi yen.
ke, iqiniso lokuthi ukuza kusengozini njengoba izindleko njengoba masonto onke, futhi ukwehla kanye amortization, ukuze eminye andise ingeniso, lihunyushwe ngokuthi kumele kube yokutakula ehloniphekile. Pachinko emakhazeni, ezifana chain ezitolo Ziningi, kodwa ngeke kangaka ukululama olukhulu, ngamandla zezimali inzima pachinko eshintsha, eminye pachinko eshintsha ngibek? eziningi Xintai is akusho slide esetholakele kusukela ngemva kwezinsuku esikhundleni ezimbalwa Uma, kukhona icala lapho ukusebenza siyowela phambi ukuthatha inzuzo.
Ngaphezu kwalokho, abakhiqizi pachinko emakhazeni, bagxila kakhulu ungaphakathi Tokyo engumakhelwane izizinda Ingabe. Endabeni sasemakhazeni pachinko edolobheni, kuyinto ikhasimende ye ukugeleza kuyashesha, ungatholi yakho ophoqelelwe ukuthenga izimo Xintai sengisilethe eziningi iyunifomu. Ngakolunye esimweni esitolo suburban, Xintai esikhundleni kuyoba cishe isigamu sezindela esitolo yedolobha. Ekhuluma kungani, ngokungafani wamakhaza pachinko yedolobha, kanye neqiniso lokuthi isitolo esincane ukuncintisana endaweni, amakhasimende ivame isikhungo, okuyinto ngokuvamile hhayi ukunyakaza kakhulu.
ukuncintisana ngoba kusho ukuthi enye inhlangano engekho, futhi aqede isidingo zokwethula imishini emisha phezulu ngokushesha. Ngaphezu kwalokho, ukuze babe amakhasimende base futhi abe ibhizinisi isikhungo njalo, sivame ukwethulwa itafula esetshenziswa kuka yakamuva ukuma iyakhula. Njengoba lokhu, kodwa esikhundleni ijubane yedolobha futhi amadlelo pachinko eshintsha abonile isizathu esenza ezahlukene, awudingi ukuba akwazi ukululama ngokushesha uma Bane yokuthengisa owethulwa Xintai.
Xintai abavamisile esitolo of elifakwe esikhundleni, Ngakho ubungenzenjani ukwenza, noma isethi yokutakula ukwethula embhedeni emadolonzima ukuba uvumelane emhlabeni ukwenza ngoba yokuthengisa bakhuphuke, zikhona emhlabeni kuphela lapha ukubona ngokusebenzisa e okwashiwo nsuku zonke .
iyona yokuthengisa yemakhono inkampani, kubonakala abantu abaningi ukuthi akuvezi umbono yokukhetha yokudlela okuhle iphuzu okunjalo umbono, ake ngiqaphele kancane. Xintai abavamisile esitolo of ukuphindisela, Ngakho ubungenzenjani ukwenza, noma isethi yokutakula ukwethula embhedeni emadolonzima ukuba uvumelane emhlabeni ukwenza ngoba yokuthengisa bakhuphuke, zikhona emhlabeni kuphela lapha ukubona ngokusebenzisa e okwashiwo nsuku zonke.
iyona yokuthengisa yemakhono inkampani, kubonakala abantu abaningi ukuthi akuvezi umbono yokukhetha yokudlela okuhle iphuzu okunjalo umbono, ake ngiqaphele kancane.